Falanqaynta Qalabka Bilowga ilaa Arduino Super Starter Kit UNO R3 Mashruuca Elegoo - Ikkaro
Inicio >> Arduino >> Qalabka bilowga ah ee Arduino Super Starter Kit UNO R3 Mashruuca Elegoo
Maalmo yar ka hor Waxaan ka soo iibsaday Qalab Bilowga Arduino, nooca 'Elegoo', dalab € 30. Waxaan hayaa xoogaa dareemayaal iyo qaybo ah oo aan iibsanayay, laakiin waxaa iga maqnaa qaar badan oo ka mid ah kuwa lagu bixiyo Qalabka waxayna u muuqatay fikrad wanaagsan in la iibsado oo la arko haddii alaabtan noocan ahi ay u qalanto. Waxay leeyihiin 4 xirmo oo lagu bilaabayo, midka aasaasiga ah waa Super Starter oo ah xirmada aan soo iibsaday ka dibna labo kale oo xitaa ka sii kooban, laakiin runtu waxay tahay inaan midkaan u qaatay dalab dartiis. Waxaan doonayay inaan qaato midka leh raadiyaha badan.
Akhrinta xoogaa dib u eegis ah ee looxyada Elegoo sifiican ayey ugu hadlaan, laakiin waxaa jira dad ka cabanaya iswaafajinta guddiga taas oo ah isku xirka Arduino UNO R3. Khibradeyda waxay ahayd mid aad u wanaagsan, saxanku si fiican ayuu u shaqeeyay, la jaan qaadaya Arduino IDE adoon waxba qaban, kaliya xir oo ciyaar. Waxaan ku rartay guba, Waxaan sameeyay xoogaa isbadal ah. Waxaan isku dayey qaybo ka mid ah si dhakhso leh wax walbana si fiican ayey u shaqeeyaan (Waxaa lagu tijaabiyay Ubuntu 16.10 iyo kubuntu 17.04)
Waxaan uga tagayaa fiidyow nooc unboxing ah oo aan sameeyay si aad u aragto sanduuqa oo nool, waxa uu keeno iyo sida loo abaabulay
Warbixinta oo faahfaahsan hoos ayaan uga tagayaa.
Dhamaadka maqaalka waxaan kuu sharaxayaa markaan arko xiiso leh xirmooyinka noocan ah.
Qalabka, qaybaha iyo dareemayaasha oo lagu daray Qalabka
Tani waa inta ay keento oo dhan. Waan rabay, Dareemaha janjeera, IC-yada, moduleka korontada, iyo LCD waligood khaldami maayaan. Marka lagu daro mid kale oo ah in markii aad mid leedahay oo keliya mashruuc, ay gaabinayso.
1 guddiga Elegoo UNO R3 (Arduino UNO R3 clone)
1 Kordhinta sabuuradda noocooda hore
1 module awood
1 Darawal Mooto loogu talagalay stepper ULN2003
1 mootada stepper
1 SG90 mootada adeegga
1 5V gudbinta
1 qayb qaata infrared (IR)
1 Joystick analog ah
1 DHT11 heerkulka iyo dareeraha huurka
1 HC-SR04 Xiinka Xiinka
1 DC 3-6 V mooto leh marawaxad
2 Buuxiyeyaasha Firfircoon iyo Joogtada ah ee midkiiba
Dareemo (kubbadda) dareeraha ama badhanka
1 74HC595 diiwaanka wareejinta
1 L293D wareegga isku dhafan ee xakamaynta mootada
5 badhano, (badhamada)
1 awood cabir
1 bandhig oo ah 1 lambar iyo 7 qaybood
4 lambar iyo 7 qaybood oo kale
Remote-ka IR infrared
Fiilo USB ah
10 Dupont Fiilooyinka Dumarka ee Dumarka ah
1 9V fiilada batteriga ee guddiga
1 9V batari
120 diidmo oo qiimeyaal kala duwan leh
25 Laydh midab leh
2 ilaah hagaajiya 1N4007
12 transists-yada 'NPN PN2222'
1 CD (CD-ga wuxuu la socdaa koodhka cashar kasta iyo maktabadaha. Marka lagu daro buug-gacmeed, sidoo kale Isbaanishka, cashar kasta iyo mashruuca ay ku shaqeeyaan. Waxaan sidoo kale kala soo bixi karnaa degelkooda)
Liiska mashaariicda lagu sameeyo Arduino oo ay noogu fidiyaan casharradooda
Astaantu waxay na siinaysaa CD ay ku jiraan dhammaan koodhku, maktabadaha iyo buug-gacmeedka Arduino. Buugga waan awoodnaa ku soo dejiso bilaash degelkooda (in kastoo aynaan iibsanayn badeecada) kaalay tilmaamaha adeegsiga kabaha Arduino, sida loogu xiro, sida loo adeegsado IDE, loo xalliyo wixii dhibaato ah ee isgaarsiineed, kombiyuutarka, iwm Ka dibna waxay ina baraysaa inaan la falgalno dareemayaasha kala duwan iyada oo loo marayo casharro. Mawduuc waliba waa cashar runtiina waa in si wanaagsan loo sharaxay. Hadaad bilaabayso waxaan kugula talinayaa inaad soo dejiso.
Casharada gacanta ee Arduino waa:
Ku dhaji Elegoo Uno R3, oo ah mid caadi ah adoo dhalaalaya hoggaanka sabuuradda
LED-yada waxay wax ka beddelaan dhalaalka hoggaanka iyagoo adeegsanaya iska caabin kala duwan
Xeerka RGB LED ee RGB LED kaas oo lamid ah mid leh 3 LEDs hal. halkan waxay sidoo kale sharxayaan waxa PWM yahay
Tigidhada dhijitaalka ah. Sida loo shido oo loo demiyo LED leh batoonada riixa, yacni ka imaadyada wax soo saarka digital-ka ah
Firfircoon dhawaaqa. Wax yar oo ku saabsan buuqayaasha firfircoon iyo kuwa shidan
Kubad leexiyaha leexinta Sida loo isticmaalo dareemahan si loo ogaado isbeddelada ku dhaca rabitaanka.
Dareeraha Ultrasound, xaaladdan waa HC-SR04
DHT11 heerkulka iyo huurka dareeraha
Qalabka wax lagu duubo ee IR si aad ugu bilowdo infrared-ka
Shaashadda LCD, sida loogu xirmo loona isticmaalo xarfaha xarfaha. LCD1602 ayaa la isticmaalay
Heerkulbeegga. Thermistor, potentiometer iyo LCD ayaa la isticmaalaa
Ku xakamee sideed leydh oo leh 74HC595, markaa uma baahnid inaad 8 loox ku isticmaasho sabuuradda
Isticmaalka kormeeraha taxanaha ah
74HC595 iyo bandhig qaybsan si loo muujiyo tirooyinka 0 - 9
Afar-god 7 xakamaynta soo bandhigida
Sida loo xakameeyo mootada DC-ga transistor-ka
Sida loo isticmaalo gudbinta
Xakamaynta matoorka isteerinka
Xakamaynta mootada Stepper oo leh kontoroolka fog
Waxay leeyihiin xirmo sare oo leh mashruucyo badan sida Raadiyaha Isdabajoogga waxayna sidoo kale na siinayaan buugga bilaashka ah
In dhamaadka maxaa? Waa u qalantaa?
Waxaan u arkaa xirmada waxtar u leh qof aan aqoon aduunkan, oo aan mashruuc gaar ah maskaxda ku haynin laakiin raba bilow tijaabinta waxa lagu sameyn karo Arduino, maxaa yeelay waxay ku siinayaan dareemayaal iyo qaybo kugu filan si aadan ugu baahnayn inaad baarto, wax iibsato, oo aad sugto inta qalabku ka imanayo. Waa hab aan nolosha lagu murgin. Mid ka mid ah xirmooyinkaan xilligan aad hesho waad ku soo dagi kartaa shaqada oo iyaguna jaban.
Waxaan sidoo kale u arkaa inay waxtar badan leedahay in loo isticmaalo waxbarashada. Xirmo loogu talagalay carruurta awoodi doonta inay qabtaan mashaariicda iyo dhammaan kala duwanaanshaha iyaga ku dhaca.
Haddii aad tan ku jirtay muddo dheer oo aad haysatid qalab aasaasi ah, anigu uma arko inay xiiso leedahay, inaad mooyaane aad dalab hesho oo aad aragto inay ka raqiisan tahay iibsashada qaybahaas aad gooni ugu baahnayd, laakiin caadi ma noqonayso .
Ugu dambeyntiina waxaan ku haray hamiga ah inaan arko xoogaa ka badan Raspberry Pi Kit iyo bilaabista aaladaha iyo Arduino oo ka imanaya noocyo kale.
Categories Arduino Tigidhka tigidhka
5 faallooyin ku saabsan «Qalabka Bilowga ah ee Arduino Super Starter Kit UNO R3 Project ee Elegoo»
Sebtember 10, 2018 at 6:48 pm
Subax wanaagsan Nacho iyo waxaan soo iibsanay isla badeecada aad adigu leedahay laakiin ma awoodo inaan ku aqriyo casharka Isbaanishka waan furaa wuxuuna ku soo baxaa ingiriisi mana garanayo sababta.
Haddii aad i siin karto fiilo, mahadsanid
Sebtember 10, 2018 at 10:18 pm
Ka soo deg buugga gacanta http://www.elegoo.com/tutorial/Elegoo%20Super%20Starter%20Kit%20for%20UNO%20V1.0.2018.07.05.zip furi oo waxaa ku jira galka Isbaanishka, maktabada, buuga iyo koodhka
Haddii aad dhibaatooyin qabto, ii sheeg oo waan arki doonaa sidaan kuugu soo diro
January 21, 2019 at 2:26 subaxnimo
Nabade Nacho, waxaan soo iibsaday isla xirmo. Laakiin ma xiri karo wadaha si uu u ogaado arduino, waxaad yeelan doontaa bogga aad kala soo bixi karto darawalka.
Mahadsanid. Marco Polo
Janaayo 23, 2019 markay ahayd 4:17 pm
Waa salaaman yihiin halkan https://www.elegoo.com/download/ , dhagsii xirmadaada waxaadna soo dejineysaa siibka gudahana waa
Abriil 2, 2020 markay ahayd 1:08 am
SALAAN MA AAN KU HELI KARO MAALMADO SIFSANKA AH, WAAD IIGU HELI KARTAA WAAD MAHADSAN TAHAY
1 Qalabka, qaybaha iyo dareemayaasha oo lagu daray Qalabka
2 Liiska mashaariicda lagu sameeyo Arduino oo ay noogu fidiyaan casharradooda
3 In dhamaadka maxaa? Waa u qalantaa?